Aghota na Agu: A Ga-enwerịrị maka Azụmahịa Mac Onye Ọrụ | Martech Zone
Na ọtụtụ ngwa azụmahịa na-agbapụ na Microsoft, Mac ka bụ ihe mgbu na butt iji gbaa ọsọ na ọnọdụ azụmahịa. Ihe kachasị ọhụrụ sistemụ arụmọrụ sitere na Apple na-enye ụfọdụ enyemaka na BootCamp, ngwa nke na-enye gị ohere ị nweta boot-Intel nke dabeere na Intel na OSX ma ọ bụ na Windows.
Dual booting, n'ihi na ọtụtụ akụkụ, bụ n'ezie dị ka na-agba ọsọ abụọ dị iche iche kọmputa si otu ngwaike, ezie. Bootcamp dị mma, mana ịgbanwee na azụ abụghị ọrụ dị mfe. Aghota edoziwo nsogbu ahụ, ọ bụ ezie na jikọtara ụwa abụọ ahụ n'ime ụwa nke na-adịchaghị ka ọ dị mma! Anọ m na-agba Ndekọ (ekele enyi, Bill) ebe ọ bụ na ọ bụ nsụgharị mbụ ya.
Mgbe coherence ẹkenam, nke ahụ bụ mgbe crazy stof malitere ime… inwe n'ọdụ ụgbọ mmiri, ọrụ mmanya na apple mmanya mmanya niile na otu window dị nnọọ ka ihe niile na-ezighị ezi! Ọbụna njọ? Dọrọ na idobe si Windows ngwa ka Mac ngwa na Anglịkan. Chaị! Na Mac na PC esemokwu na-ezu ike, ọ bụghị ya?
Adịghịzi onye na-ese ihe osise, onye na-emepụta Weebụ, ma ọ bụ onye na-ahụ maka mmesi obi ike ngwa ngwa chọrọ ọtụtụ ngwaike iji mee ihe dị mfe dịka nnwale maka nnabata nchọgharị. Ha niile nwere ike ịgba ọsọ na-enweghị otu Mac - na m MacBookPro.
Mgbe agụ pụta, ọ dị m ka ọ happinessụ m agwụla! Emebiri m XP ma enweghị m ike ịnweta ngwa m ka ọ rụọ ọrụ dị ka ha na-emebu. Emechara m pee, ọbụna na-eji ohere dee ụfọdụ ndị folks n'elu Ndekota n'onwe ya. Ha bụ ezigbo ụmụ nwoke ma mesie m obi ike na enyemaka dị n'ụzọ!
Aghota na agu
N’izu a ka ọ bịara! Ọhụrụ upgrades maka Ndekota kwukwara ụfọdụ ndị ọzọ na atụmatụ tinyere zuru Leopard ndakọrịta. Ọ bụrụ na ị na-achọ oké ngwa maka gị Mac enthusiast - nke a nwere ike ịbụ ya.
Ọ bụrụ na ị bụ onye PC na ndị ụjọ Mac ndị a na - atụ ụjọ - nke a bụ ohere gị ka ị nwere apụl na - acha ọkụ na laptọọpụ gị mana ị na - eme ezigbo ngwa ol na Windows.
Tags: ihe ngosiimewe nzaghachinchọpụta ahịanyocha onlinenzaghachi ngwaahịasocial media ndụSurveyMonkeynyocha maka nyocha ahiaịbervungwá ọrụ weebụ
Dec 15, 2007 na 7:34 PM
Enwebeghị m obi ike zuru ezu iji nweta Mac mbụ m. Nwa m nwanyị jiri iyi ya arsụọ iyi na mama ya, ndị ọzọ dị ịrịba ama m, na-ezuru Mac ya oge niile n'ihi na ọ dị mfe iji. Etoro m… (wee site na nsogbu oge etiti ruo na ugwu)… na Windows ma na-ala azụ ịgbanwe. Ndi mmadu gha enyere m aka ime ihe ziri ezi. Kedu ihe kpatara m ga-eji zụta Mac. Achọrọ m laptọọpụ ọhụrụ ma na-agbanye ọkụ.
Dec 15, 2007 na 7:42 PM
Mac bụ ụzọ isi gaa, ọkachasị ugbu a na Ndekota. Na-akwado iji wụnye agụ owuru na nwunye m si mac laptọọpụ. N'ebe ikpeazụ m na-achọ maka laptọọpụ mac iji nwalee ihe nchọgharị obe na igwe 1 kama ịchọ ụlọ nyocha.
Enweela m desktọọpụ Mac ruo ọtụtụ afọ ma enwebeghị m nsogbu ọ bụla na ya dịka m na-eji PC na windo.
Dec 15, 2007 na 7:53 PM
Anọ m na-eche maka ị nweta nke a maka ọrụ m, n'ihi ya enwere m ike ịnwale ebe nrụọrụ weebụ na ihe nchọgharị Windows… Ana m eche otú akụ hog ọ dị?
Dec 15, 2007 na 8:18 PM
Ọ bụghị kwa ọjọọ, Mike. Maka usoro OS ọ bụla ị setịpụrụ, ị nwere ike ịtọ ọnụọgụ ebe nchekwa metụtara. Enwere m 2Gb nke RAM ma nwee Windows XP na-agba ọsọ ruo 1Gb.
Ọ naghị ewe nnukwu ikike iji rụọ ọrụ ma os - mana ngwa ị na-agba n'ime ya ga-abụ hogs ma ọ bụrụ na ha bụ hogs tupu.
Dec 15, 2007 na 11:36 PM
M na-eji VMWare Fusion, nke m kwenyere bụ nhọrọ ka mma, ebe ọ bụ na ahaziri ya karị. Kedu ihe ị ga-eme na ihe atụ Windows gị Parrallels ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwaga linux n'ọdịnihu? Enweghị nsogbu na Fusion…
Dee 16, 2007 na 9: 52 AM
Amaghị na Linux dị m n’ọdịnihu dị nso site na ọrụ onye ọrụ desktọọpụ azụmaahịa. Na Ndekota m nwere ike ịgba ọsọ ngwa ahịa niile m chọrọ. M nwekwara ike na-agba ọsọ Linux na Ndekota (M nwere Ubuntu ma n'ezie messed m echichi!).
Abụ m onye na-akwado ịba uru na VMWare. Ana m agagharị ebe anyị na-emepụta ihe Bluelock, a ụlọ ọrụ na-mastered virtualization maka kwadoro ngwa na VMWare.
Ọ dị mma ịhụ gị ebe a, Dale! Ahụrụ m akwụkwọ ndekọ ExactTarget IPO ka e nyefere ya na SEC. Ihe dị jụụ!
Dee 16, 2007 na 3: 49 AM
A post banyere virtualization na mac, na ị na-ekwu banyere otu n'ime ndị isi egwuregwu? Ebee ka ịhụnanya maka VMWARE (nke m chere na ọ bụ ihe ka mma seems dị nnọọ ka ọ “na-egbu maramara”).
Dee 16, 2007 na 9: 55 AM
M na-atụ ụjọ na m bụ onye ọhụụ mgbe ọ bịara na VMWare ma ghara inwe ya. Echere m na ọ bụ n'ihi na ihe niile m chọrọ na-arụ ọrụ dị ukwuu na Ndekota. Dịka m dere Dale n'elu, VMWare ga-abụ akụkụ bụ isi nke ntinye ngwaahịa anyị n'oge na-adịghị anya, agbanyeghị. Anyị ga-enwe ike ịmegharị gburugburu wee weta 'ụtọ' dị iche iche nke ngwa anyị n'afọ ọzọ.
Dec 17, 2007 na 2:16 PM
M nnọọ kwalite Ndekota ka ọhụrụ version, na ugbu a, Vista (Azụmaahịa) a chọrọ ka m rụọ ọrụ ya ọzọ, na online ebighị adịghị arụ ọrụ. Nke a na - emekwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba ọsọ VMware ma ọ bụ Ndekota na njikọ na bootcamp.
Dec 17, 2007 na 5:39 PM
Ọ ga-atọ gị ụtọ ịhụ ka Microsoft ga-esi mesoo omume ọma na usoro mmegharị ha - ihe m na-echeghị banyere ya! Ikekwe nke a bụ otu n'ime uru ị ga-eso ngwugwu ọhụụ Microsoft, Hyper-V!
Dee 18, 2007 na 12: 21 AM
Ọ na-ewute ya nke ukwuu ịghara inwe ike iji ụdị bootcamp nke Windows n'akụkụ ụdị VMWare n'ihi mmachi ebido. (Ọ na-ahụ “ngwaike ngwaike ahụ” ma deactivates gị mgbe ị gbanwere n'ụdị ọzọ).
Abụghị m onye Windows kpọrọ asị n'ụzọ ọ bụla, mana nke a doro anya na ọ na-ewute m mgbe m zụtara Vista Business.